Moto Guzzi V7 Classic (2010) ပြန်လည်သုံးသပ် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home → Moto Guzzi → Moto Guzzi V7 Classic (2010) ပြန်လည်သုံးသပ်
20 Jun 2015 | Author: dima | Comments Off on Moto Guzzi V7 Classic (2010) ပြန်လည်သုံးသပ်
Thread: Moto Guzzi V7 Classic (2010) ပြန်လည်သုံးသပ်
It handles fairly predictably but does getalittle out of shape if pushed too hard. နေဆဲ, is lots of fun due to its light weight and good punch out of corners.
ပထမဦးဆုံးအစီးနင်: Moto Guzzi Stelvio 1200 8V and Stelvio NTX – လမ်းမကြီးစမ်းသပ်မှု: ပဌမ…
20.06.2015 | Comments Off on ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
19.06.2015 | Comments Off on Moto Guzzi ကနေနယူးထုတ်ကုန်, Vespa နှင့် Aprilia Eicma မှာမိတ်ဆက် …
19.06.2015 | Comments Off on အဆိုပါစပျစ်သီးမီးသတ် Guzzi V7 750 “အလွန်အထူး” DocuBlog Life's ဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်…
18.06.2015 | Comments Off on စုံတွဲတစ်တွဲအလင်းများ CEV ဘေးထွက် Guzzi Hercules Ercolino Tricar အခန်း arrow…
18.06.2015 | Comments Off on Moto Guzzi ကလပ်ပိုလန်: ဒါဟာရတုခဲ့သည် – Moto Guzzi ကမ္ဘာ့ဖလားကလပ်
18.06.2015 | Comments Off on Moto Guzzi ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ Daytona ဆိုင်ကယ်အပတ်ဆိုင်ကယ်သတင်းထဲသို့အမြန်နှုန်း
18.06.2015 | Comments Off on 2008 Moto Guzzi Norge 1200 – စမ်းသပ်ခြင်း Drives – 2008 Moto-Guzzi Tours – အစဉ်အဆက်…
18.06.2015 | Comments Off on Moto Guzzi Le Mans – ဝီကီပီးဒီးယား, အခမဲ့စွယ်စုံကျမ်း
တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype စက်ဘီး Kawasaki ER-6n စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati 60 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Aprilia Mana 850 စမတ် eScooter ဆူဇူကီး AN 650 Ducati Desmosedici GP11 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Brammo Enertia Moto Guzzi 1000 Daytona Injection သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Bajaj Discover Ducati Diavel